Imibono yesithombe somshado womshado ebusika
Ubusika obumnandi buyisikhathi esihle, sokuthanda umshado wesithombe somshado. Naphezu kwemakhaza, imibhangqwana eminingi ikhetha izinyanga zasebusika ngomshado wayo. Futhi akumangazi, ngoba izihlahla eziqhwaqhoqho kanye nezihlahla ezikhethwe iqhwa zenza leso simo esiyingqayizivele sezinganekwane kanye neholidi ofuna ukuhlala kulo albhamu yezithombe zomshado wakho.
Izindawo zokushada isithombe somshado ebusika
Yiqiniso, ukuhamba emshadweni ebusika, ipaki ekahle, ingadi noma ingadi. Imvelo ngokwalo isebenza njengesizinda esihle sehlumela lesithombe, futhi uma unakekela ukuhlobisa okuhle - izithombe zakho zizoba uhlobo lwangempela lweholide kanye nomzwelo wokuthandana.
Ukuze uthole isithombe somshado emshadweni emgwaqweni, thatha nawe, ngaphezu kwe-champagne yendabuko, futhi i-thermos enetiyi noma ikhofi ukufudumala.
Izithuba zokukhishwa kwesithombe somshado ebusika akufanele zenziwe futhi zingavamile. Okokuqala, yiba nguwe. Smile, ukuhleka, ukuhlekisa - kungukuphela kweholide lakho.
Futhi esinye sezikhathi ezibaluleke kakhulu sokuphumelela kwesithombe somshado wesithombe - musa ukugxila kumasevisi ochwepheshe wangempela. Ngisho nesihlobo esinethalente kakhulu nekhamera elibiza kakhulu ngeke lenze lezo zibhamu ukuthi i-photographer engakwazi ukuyihumusha.
Kuphi ukugcina isithombe somshado ebusika?
Kodwa uma ungakalungi ukuhamba, ke-ke, uyazibuza ukuthi uzohlela kuphi isithombe sokushada somshado ebusika ? Lapha singasiza isi-studio, noma ingaphakathi elingaphakathi kwelinye ikamelo (cafe, yokudlela noma yaseshashalazini). Noma ngisho nesilandiso somshado, yiziphi izimbhangqwana eziningi eziqashisa ngalobo busuku bomshado.
Ukudubula kumfudumalo kuzokuvumela ukuba uvule phambi kwekhamera ngendlela engcono kakhulu, futhi umthwebuli wezithombe ngosizo lokukhanyisa okucacile uyokwenza izithombe ezimangalisayo. Futhi akudingeki ukuba ugibe izandla zakho ezihlanjululwa kusuka ku-frost, okuyiyona inzuzo yokudubula ngaphakathi.
Emadolobheni amaningi amakhulu kunama-studio anezindawo ezinhle kakhulu ezingaphakathi, ngokuvamile zikhona izinto ezihlotshisiwe ezihlotshisiwe "emaceleni" ngemfanelo yomshado. Kodwa emishasweni yomshado, ungakhohlwa ukuxoxa ngesifiso sakho ne-photographer kusengaphambili, ukuze kungabi isimanga ukuthi enze isinqumo sakho ngomzuzwana wokugcina esikhundleni sokuhamba emvelweni ukuze uye esikhwameni.
Uma ufingqa okubhaliwe, khona-ke ukuchithwa komshado ebusika kukunika izinketho eziningi zokuqaliswa kokuhamba komshado wakho, ngakho xhuma umcabango, futhi usebenzise lolu suku kumnandi futhi kulula.
Ungabheka kanjani encane kuneminyaka yabo?
Ama-Photoshoot ngesitayela se- "shades of gray"
Yini okufanele ugqoke ngengubo ye-emerald?
Isiphi isikhwama sokugqoka epaki?
Izingqikithi zasolwandle ezembatho
Yini engingayigqoka nge jeans?
Indlela yokugqoka ngendlela efanele?
Amathiphu omfashini wabesifazane abaphelele
Amadeyili e-facade ceramic
Amagilebhisi - okuqukethwe kwekhalori
Ukuguqulwa kwesitayela sikaMelania Trump - kusuka entombazaneni enesifiso somklamo kumfazi womengameli
Indlela yokwelapha izikebhe ezithendeni?
I-Bulldog yaseMelika - incazelo yokuzalwa, izici zokunakekelwa
I-Fenistil yabantwana abasha
UJean noParaskeva - iqoqo elisha 2016
Ingakanani ingane okufanele isilinganise enyangeni engu-1?
I-Epilator kanye nokuthungatha - umehluko
Izindebe zasebusika i-Adidas
Yini engingayitshala ipheya?
Indlela yokubeka i-laminate?
Ukufudumala kwendlu yangasese
I-sofa ekhoneni elimhlophe
Isaladi nge-artichokes ekheniwe
I-fetal head circumference ngesonto
Kungakanani ukushisa nge-bronchitis?
I-Topyari - isigaba somsebenzi
Ama-apricot abomile, amakhiwane, umlimi otholile umgogodla